Zingahamba ixesha elingakanani iintlanzi zingatyi → Fumanisa apha | Ngeentlanzi
UCarlos Garrido | | Ukutya iintlanzi
Okwangoku, zininzi izilwanyana zasekhaya esinokuzifumana njengenye yeendlela zokuba ngamaqabane ubomi kunye nokwabelana ngekhaya nathi. Kuzo zonke ezo zinto unokukhetha kuzo, iintlanzi zezinye zezilwanyana zasekhaya ezaziwa kakhulu.
Ezi zilwanyana zinobuhlobo ziye zafikelela ekuthandweni ngenxa yokuba, eneneni, azidingi kukhathalelwa okugqithileyo, nangona kunjalo, kuya kufuneka unike ingqalelo ekhethekileyo kwiinkcukacha ezithile ezinje ngokutya. Kwaye, Iyakuhlala ixesha elingakanani intlanzi ingatyi?
Impendulo yalo mbuzo isasazeke ngokwenyani kwaye ixesha elithile alikabikho. Kulo lonke eli nqaku siza kuzama ukujongana nalo mbandela, sinike iingcebiso kunye neemveliso ezahlukeneyo esinokuthi sibe nazo xa kunokwenzeka ukuba kungenzeki kuthi ukondla abahlobo bethu abancinci, ngapha koko, ukutya kwabo kuya kuxhomekeka ihlala ixesha elingakanani intlanzi.
1 Zingaphi iintsuku iintlanzi ezingahamba zingatyanga?
2 Iimpawu kunye nokuziphatha kwentlanzi elambileyo
3 Iingcebiso malunga nentlanzi ukuba ihambe ixesha elide ngaphandle kokutya
4 Ungazithintela njani iintlanzi zethu ekutyeni?
Zingaphi iintsuku iintlanzi ezingahamba zingatyanga?
Njengoko kukhankanyiwe ekuqaleni, eyona mihla inokuthi intlanzi inyamezele ngaphandle kokutya ayichazwanga. Kutheni, Kulula kakhulu. Eli xesha lixhomekeke kwizinto ezahlukeneyo, ezinjengeentlobo zeentlanzi ekuthethwa ngazo, imeko yempilo yentlanzi, inkathalo eyayifunyenwe ngaphambili, imeko yamanzi ahlala kuyo, konke ukutya kwayo kwangaphambili, njl.
Umondli we-Aquarium ...
Nangona kunjalo, ukuba usondelelo lunokwenziwa. Phantsi kweemeko eziqhelekileyo, intlanzi inokuhamba ngaphandle kokutya kangangeentsuku ezingama-2-3. Nje ukuba eli xesha lidlulile, isilwanyana siza kubonisa ubuthathaka obuthile, obusengqiqweni kwelinye icala, kwaye oku kunqongophala kokutya kunye nezondlo kuya kubangela ukuba ukhuselo lwehle kakhulu. Le meko ibeka impilo yezilwanyana emngciphekweni kwaye ibangela amathuba okuba iintlanzi zifumane isifo kwaye, ngenxa yoko, zife.
Kukho amaxesha apho sinokuthi sive ukuba ichazwa njani ngokuchanekileyo ukuba iintlanzi zinokuya phantse iveki zingatyanga. Umsebenzi onjalo unokwenzeka, kodwa ngokuqinisekileyo kunzima, ke ndikucebisa ukuba ungayithembi.
Ukuba uza kuba ngaphezulu kweentsuku ezi-2 okanye ezi-3, isisombululo esiluncedo kakhulu kukuba ukubheja kwi feeder oluzenzekelayo, ke iintlanzi azizukuphelelwa kukutya ngelixesha singekhoyo.
Iimpawu kunye nokuziphatha kwentlanzi elambileyo
Ukuba, nangasiphi na isizathu, intlanzi yethu khange itye ukutya ixesha elithile, iyakubonisa uthotho lweempawu eziza kusebenza njengomqondiso wesilumkiso wokuthatha amanyathelo ngokukhawuleza.
Kwindawo yokuqala, ukuba iintlanzi zilambile singabona ukuba kwenzeka njani indlela abaziphethe ngayo ayinakuphumla kunesiqhelo, benyuka amaxesha amaninzi kwiindawo eziphezulu zamanzi ndikhangela ukutya. Ekugqibeleni, baba nexhala.
Oku kulandelwa lolunye uthotho lweempawu ezingachaphazeli indlela yokuziphatha, kodwa endaweni yoko yenze imeko yomzimba wesilwanyana kwaye ivele xa inkqubo yendlala iqhubele phambili. Zibonwa ngaphezulu kwako konke kulusu lwakho kunye nezikali, ezilahlekelwa kukuqaqamba kunye nombala, ngamanye amaxesha zibonise imbonakalo ewohlokileyo..
Okokugqibela, kufanele ukuba kuqatshelwe ukuba xa ukutya kunqabile okanye kulambatha, iintlanzi zinokuhamba kwiinkqubo zoxinzelelo olunjalo, ezinyanzela kwaye zibaqhubele ekuziphatheni okungaphaya kwemida yokutya abantu, kuba bekhangela ukutya okungapheliyo. baya kuba nako ukuhlasela nokubulala abanye abantu. Ke, ukuba sibona iintlanzi ezininzi kwi-aquarium yethu zinamanxeba kwimiphetho kunye nomsila okanye iintlanzi ezithe zanyamalala ngokukrokra, luphawu lokuba into ayihambi kakuhle.
Iingcebiso malunga nentlanzi ukuba ihambe ixesha elide ngaphandle kokutya
Ngokwenyani, ambalwa amaqhinga akhoyo okwenza ukuba iintlanzi zethu zihlale ixesha elide ngaphandle kokutya, kuba ukunqongophala kokutya kubangela ukuba isilwanyana singakwazi ukuqhubeka neenkqubo zayo ngokuchanekileyo kwaye singene engozini enkulu. Ke ngoko, eyona nto isebenzayo kukuzama ukuthintela iintlanzi zethu ekuhambeni ixesha elide lendlala, nangona kuyinyani ukuba ngamanye amaxesha kuvela iingxaki ezingalindelekanga ezenza ukuba singakwazi ukubabonelela ngokutya ixesha elithile.
Ukuba imeko enjalo iyenzeka, kukho izikhokelo okanye izilumkiso ezinokunceda iintlanzi zethu zisinde ithuba elide. Omnye wazo kukubonelela ngeentlanzi zethu ngendlela etyebileyo eyahlukileyo ngamaxesha onke oko kubenza babe novimba othile wamafutha kunye namandla, kwaye oku kubagcina besempilweni kwaye bomelele. Eyona ndlela yokufezekisa oku kukulungiselela ukutya kwasekhaya okuloba Ngaphandle kokuba kulula kakhulu, iya kusongela imali.
Ndingakucebisa uthenge isondli seentlanzi esizenzekelayo. Ngale nto uya kuyisombulula ingxaki kuninzi lwamatyala.
Amanye amanyathelo kufuneka enze, kwaye okuninzi, ngamanzi. Amanzi kwiitanki zethu zentlanzi, ii-aquariums okanye amachibi kufuneka acoceke kangangoko. Ukuba siyakufezekisa oku, siya kwenza ukuba izilwanyana zethu zingabinasulelo, iintsholongwane kunye nezidleleli ezinokudlala ngazo ukuba iintlanzi zibuthathaka, njengoko kusenzeka xa zingakhange zifake kwanto iiyure ezininzi.
Okokugqibela kananjalo Kufuneka sinikele ingqalelo kumanqanaba eoksijini emanzini. Le nto ibalulekile, kuba amanqanaba eoksijini abalulekile kwikamva lentlanzi. Amanzi ahlwempuzekileyo e-oksijini, kunye nokunqongophala kokutya, ajika abe yindawo ebulalayo.
Ungazithintela njani iintlanzi zethu ekutyeni?
Ngelishwa, zininzi izihlandlo apho kufuneka sishiye ikhaya, umzekelo xa siseholideyini, kwaye asinaye umntu wokukhathalela nokondla izilwanyana zethu.
Ngeentlanzi, ezinye iimveliso ziyafumaneka kwintengiso ezinokuthi zibonelele ngokutya kwi-aquarium ixesha elithile.
Kukho iigobolondo okanye iipilisiEzona mpawu zimhlophe ngombala, ezilungiswe kwiitanki zentlanzi ezinyibilika kancinci kancinci, zikhuphe izinto ezithile ezisebenza njengokutya kweentlanzi. Kuyinyani ukuba kufuneka sibakhathalele ngokukhethekileyo, kuba ezinye zezinto abazikhuphileyo zinokutshintsha iiparameter zamanzi kwaye zibangele iziphumo ezichaseneyo noko sikufunayo.
Ngendlela efanayo nezi zisebenza ngayo ezi pilisi izinti okanye iikuki esiyifumana nakweliphi na iziko elikhethekileyo kwizilwanyana zasekhaya. Ngokusisiseko iquka Ndicinga icinezelwe, ethi inyanzeliswe ngokuthe chu emanzini e-aquarium.
Njengecebo lokugqibela, elilelona lifanelekileyo, sinikwa lona Los abasasaza ukutya kwentlanzi. Ezi zixhobo zibekwe kumphezulu wamanzi, umzekelo kumda ongasentla wetanki yentlanzi, kwaye zikhulule ukutya okugcinwe kwitanki yalo kwisikhokelo ngokusekwe kwinkqubo edlulileyo esiyenzileyo. Ziluncedo kakhulu kwaye kulula ukuzifumana. Ewe, xa ukutya kukwitanki ixesha elide kuyakufuma kwaye kuphulukana neepropathi zayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Ukutya iintlanzi » Ingahamba ixesha elingakanani ngaphandle kokutya
Ndiyabulela kakhulu, ngokwenene; Ngale mini bandinike enye kwaye andinakutya kwentlanzi. Ke ngomso ndiza kuba nakho ukuyithenga ngokuzolileyo: 3
UMarco Salazar sitsho
Inkcazo elungileyo kakhulu enkosi
Phendula uMarco Salazar
ICarlos Housing sitsho
Eyam ayityanga i2years, ngaba akazokufa?
Phendula uCarlos Vivienda
Molweni, ndinentlanzi yesabikazi kwaye khange itye iveki yonke ... ndingenza ntoni?
Iintlanzi zam khange zitye iintsuku ezi-2 kwaye ndineentlanzi ezi-6 kwaye ndiyoyika ukuba bazakutyana, ukuze ndibanike ukutya
Molo, ndineentlobo ngeentlobo zeentlanzi zaseJapan kwaye azityi okanye zizikhuphe kwaye zihlala zisezantsi kwe-aquarium, ndingenza ntoni?
Enkosi ngeengcebiso ndiyathemba ukuba intlanzi yam iyasinda njengoko iwele phantsi kwaye ngoku ayifuni kutya :(
Ewe, intlanzi yam khange itye iinyanga ezi-4 kwaye isaphila, kunokuthiwa inerekhodi yeGuines.
Ngenxa yezizathu zokunyanzelwa ndiyishiyile intlanzi yam ngaphandle kokutya okanye ioksijini kangangeenyanga ezintathu ezinesiqingatha khange ndicinge ukuba ndibabone bephila kodwa bebekhona kodwa bebekhona malunga namashumi amabini anesithandathu ndifumene malunga neshumi elinesihlanu kakuhle ungaluthelekelela uvuyo lwam inyaniso khange yenziwe bekufanele ukuba batya abantu kuba andifumananga nto yabanye kunye neoksijini apho ukuba andazi ukuba basinde njani enyanisweni
Ndinegalufa ebengafuni nokutya kangangeentsuku ezi-4 andazi ukuba izakuba yintoni… enkosi
Molo ngamanye amaxesha aphelileyo, ukuza kuthi ga ngoku iintlanzi zam bezisweleka, zidumbile kakhulu kwaye i-cloaca yazo idumbile, kwaye ndafumana ezinye zityiwa ngabanye, ndibondla amaxesha ama-2 ngemini ziiguppies, nditshintsha amanzi rhoqo kwiiveki ezi-2 / 3 kwaye ndihlamba isihluzo sakho okokugqibela ndisusa yonke into kwaye ndihlamba utshintsho lwamanzi ngama-4%